အကောင်းဆုံးကို TOOLS များနှင့်အစီအစဉ်များ - WINDOW 7, 8, 10 ရက်တွင်ဂိမ်း ACCELERATION - WINDOWS ကို - 2019
တခါတရံသူကဂိမ်းမျှသိသာအကြောင်းပြချက်နှေးကွေးမှစတင်ကြောင်းဖြစ်ပျက်: ရထားသင်၏ကွန်ပျူတာဆိုတဲ့စကားလုံးမလိုတော့ဘူးတာဝန်များကိုတင်ဆောင်မဟုတ်ဘူး, ဗီဒီယိုကဒ်နှင့် Processor ကို overheat ပါဘူး, စနစ်လိုအပ်ချက်များကိုတွေ့ဆုံခဲ့သည်။
ထိုကဲ့သို့သောကိစ္စများတွင်ပုံမှန်အားဖြင့်များစွာသောအသုံးပြုသူများကို Windows ပေါ်မှာအပြစ်တရားမှစတင်။
အများအပြားနှေးနှင့် friezes ပြင်ပေးဖို့ကြိုးပမ်းမှုမှာ Junk ဖိုင်များကိုရှင်းလင်းလက်ရှိဗားရှင်းနဲ့အပြိုင်အခြား OS ကို install လုပ်များနှင့်တစ်ဦးထက်ပို optimized ဂိမ်းကိုရှာဖွေနိုင်ဖို့ကြိုးစားစနစ် reinstall ။
ပျင်းစရာကောင်းပုံရသည်မဟုတ်သကဲ့သို့ငါတင်းကြပ်အလို့ငှာ, စည်းကမ်း, ဒါပေမယ့်စာသားနှင့်အတူကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်အခြို့သောလွတ်လပ်ခွင့်ကိုခွင့်ပြု၏အတိုင်းအတာကြိုက်တယ်။ ငါဘာသာရပ်များအိုင်တီ, ဂိမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းကြိုက်တတ်တဲ့။
အသုံးအများဆုံးအကြောင်းပြချက်နှေးနှင့် friezes ပိတ်ဆို့မှုကို RAM နဲ့ CPU ကိုဖြစ်ပါတယ်။ operating system ကိုသငျ့လျြောသောစစ်ဆင်ရေးများအတွက် RAM ကိုတစ်ဦးအခြို့သောငွေပမာဏကိုလိုအပ်သည်မေ့လျော့မနေပါနဲ့။ Windows 10 ကို RAM ကို2GB ကိုဖြစ်ပါတယ်။ ဂိမ်း4GB အထိလိုအပ်ပါတယ်လျှင်အကျိုးဆက်သည်, PC မှာ RAM ကိုအနည်းဆုံး6GB ကိုရှိရမည်။
A ကောင်းဆုံး option ကို Windows တွင်အရှိန်မြှဂိမ်းများကိုလုပ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ် (Windows တံခါးပေါက်အပေါငျးတို့သလူကြိုက်များဗားရှင်းအတွက်အကျင့်ကိုကျင့်: 7, 8, 10) အထူးအစီအစဉ်များကိုအသုံးပြုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ထိုသို့သော utilities အထူးထိုမှတပါး, သူတို့ထဲကအတော်များများဟာ registry ကိုအတွက်မလိုအပ်တဲ့ယာယီဖိုင်တွေနဲ့မမှန်ကန်တဲ့ entries တွေကို run နေအားဖြင့်သန့်စင်စေနိုင်သည်, ဂိမ်းများအတွက်အများဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်သေချာစေရန်, Window ၏အကောင်းဆုံး setting များကိုတင်ထားရန်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲနေကြပါတယ်။
AMD ၏ (Radeon), Nvidia: စကားမစပ်အဆိုပါဂိမ်းထဲမှာသိသိသာသာအရှိန်သင်၏ video card ကိုများအတွက်မှန်ကန်သော settings ကိုဦးတည်သွားစေ။
အဆင့်မြင့် System ကို Optimizer
အဆင့်မြင့် System ကို Optimizer - အဓိကပြတင်းပေါက်။
တစ် paid tool ကိုအချက်ကိုနေသော်လည်းကြောင့် optimization ၏စည်းကမ်းချက်များ၌အများဆုံးစိတ်ဝင်စားဖို့နှင့်စွယ်စုံတစ်ဦးပါ! ယာယီဖိုင်များ, မမှန်ကန်ကြောင်း registry ကို entries တွေကိုဟောင်းနွမ်းအသုံးမပြုတဲ့အစီအစဉ်များကိုဖျက်သည် Auto-download, clean ဟောင်းနွမ်းယာဉ်မောင်းကို update: ကမဆို "အမှိုက်သရိုက်" ကနေသန့်ရှင်းရေးမှပထမဦးဆုံးလိုအပ်သောဖြစ်ပါသည်, Microsoft Windows နဲ့များအတွက်အကောင်းဆုံး setting များကိုတင်ထားရန်မစတင်မီ - ငါအဘယ်ကြောင့်ဖြစ်သည့်ပထမဦးဆုံးရာဌာန၌ထား ဒါပေါ်မှာ။ ဃ။ လက်စွဲထဲမှာအားလုံးဖြစ်နိုင်သမျှ Making, ထိုသို့ထိုကဲ့သို့သောပရိုဂရမ်များ၏အကူအညီဖြင့်ဖြစ်နိုင်သမျှပါ!
အလုပ်အပြီး, ဒါပေမယ့်လည်း virus နဲ့ spyware တွေရဲ့ရန်အစီအစဉ်များအားဖြင့်ကျန်ရစ်တူ memory နဲ့ CPU ကိုအထူးကြပ်မတ်နိုင်ပါမလိုအပ်တဲ့ဖိုင်တွေမသာ။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, နောက်ခံ antivirus ကိုပြေးဗိုင်းရပ်စ် applications များဂိမ်း၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုထိခိုက်စေခွင့်ပြုမည်မဟုတ်ကြောင်းကိုသေချာပါစေ။
ဒါကြောင့် (သင့် PC ကိုသန့်ရှင်းရေး၏အသုံးအနှုန်းများအတွက်ဖန်စီဖမ်းပါဘူး, သို့မဟုတ် utility ကို) အလုံအလောက်အခွင့်အလမ်းများကိုဖွစျလိမျ့မညျဘယ်သူကိုမှလမ်းအားဖြင့် - ငါကဒီဆောင်းပါးဖတ်ရှုဖို့အကြံပြု:
ကျနော်တို့ကိုအောက်ပါအစီအစဉ်များကိုသုံးစွဲဖို့အကြံပြု drivers တွေကို upgrade to:
Windows ကိုရှင်းလင်းပြီးနောက်ကအားလုံးကိုဂိမ်းအတွက်အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်မှုများအတွက် configured အတူတူ utility ကို (Advance System ကို Optimizer) တွင်ရှိနိုင်ပါသည်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့, "ကို Windows Optimization" tab အောက်မှာသွားပါနှင့် "ဂိမ်းအတွက်အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်ပါ" ကိုရွေးချယ်ပါ, ထို wizard ကိုရဲ့ညွှန်ကြားချက်များကိုလိုက်နာပါ။ သောကြောင့် လုံးဝရုရှား utility ကို, ပိုမိုအသေးစိတ်မှတ်ချက်များအတွက်ကြောင့်မလိုအပ်ပါဘူး!?
အဆင့်မြင့် System ကို Optimizer - Windows ကို optimization ဂိမ်း။
အများအပြားဂိမ်းများကိုအရှိန်မြှင့်ဖို့အကောင်းဆုံး tools တွေတစ်ခုမှာ! အတော်များများကလွတ်လပ်သောစမ်းသပ်မှုခေါင်းဆောင်တစ်ဦးမဟုတ်, အခွင့်အလမ်းအားဖြင့်ထိုကဲ့သို့သောဆောင်းပါးတွေများစွာကိုစာရေးဆရာများအားဖြင့်အကြံပြုထားတဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
Windows ကိုစီစဉ်ပေးသည် (ဒါပေါ်က7မှာအလုပ်လုပ်တယ်, 8, Vista, XP နဲ့။ ) ဒီဂိမ်းအများဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်မှာအပြေးကြောင်းဒါ။ စကားမစပ်, အတွက် configuration ကိုအလိုအလျောက်ရာအရပ်ကိုကြာ!
ဒါဟာ (ထို Defragmentation အကြောင်းကိုပိုမိုအသေးစိတ်အချက်အလက်များအတွက်) ဖိုင်တွေနဲ့ဂိမ်းဖိုင်တွေ defragments ။
အဆိုပါဂိမ်း၏ video recording, screenshots များတာ။
operating system ကိုအားနည်းချက်များများအတွက်ရောဂါနှင့်ရှာဖွေရေး။
ယေဘုယျအားဖြင့်ကပင်တစ်ခုတည်း tool ကို, သင်၏ PC ကိုဂိမ်းများ၏စွမ်းဆောင်ရည်ပိုကောင်းအောင်နှင့်အရှိန်အဟုန်မြှင့်ရန်ကောင်းတစ်ဦးအစုံမဟုတ်ပါဘူး။ ငါကြိုးစားရန်အကြံပြုသည်ဤအစီအစဉ်၏အသုံးပြုမှုကိုဖြစ်ဖို့သေချာသည်ကား,
အဆိုပါ hard disk ကို Defragmentation အထူးအာရုံစိုက်။ အဆိုပါတိကျတဲ့နိုင်ရန်အတွက်မီဒီယာအပေါ်ဖိုင်များ, ဒါပေမယ့်ရွေ့လျားခြင်းနှင့်ဖျက်မှုကဤအရပ်တို့ကိုသိမ်းပိုက်ဖို့အခြားဒြပ်စင်ခွင့်မပြုသဖြင့်အချို့ "ဆဲလ်" တွင်အမှတ်အသားများစွန့်ခွာလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်ရှည်လျားသောရှာဖွေရေးနှင့် indexing စနစ်၏အကြောင်းရင်းဖြစ်လိမ့်မည်ဟုတစ်ဖိုင်ရဲ့အစိတ်အပိုင်းများအကြားကွာဟချက်ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ Defragmentation အားဖြင့်စနစ်, ဒါပေမယ့်လည်းဂိမ်းစွမ်းဆောင်ရည်မသာအကောင်းဆုံး, အ HDD ပေါ်ဖိုင်တွေရဲ့ status ကိုချောမွေ့ပါလိမ့်မယ်။
1. Windows ကို Adjust (ဒါပေါ်က7မှာအလုပ်လုပ်တယ်, 8, Vista, XP နဲ့။ ) ဒီဂိမ်းအများဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်မှာအပြေးကြောင်းဒါ။ စကားမစပ်, အတွက် configuration ကိုအလိုအလျောက်ရာအရပ်ကိုကြာ!
(ထို Defragmentation အကြောင်းကိုပိုမိုသိရှိလိုပါကများအတွက်) 2. ကို Defrag ဖိုင်တွေနဲ့ဂိမ်းဖိုင်တွေ။
အဆိုပါဂိမ်း၏ 3. ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်, screenshots များတာ။
4. Diagnosis နဲ့ OS အားနည်းချက်များရှာဖွေ။
ရေးသားသူ: Uniblue စနစ်များ
ဤသည် utility ကိုတာဝန်ခံနှင့်မှတ်ပုံတင်ရေး Troubleshoot မပါဘဲနှင့်ကမ Junk ဖိုင်များကိုဖျက်ပစ်ပါမည်။ သို့သော်သူမသည်အဘယ်အရာ၏နံပါတ် - ပဲကြောက်မက်ဘွယ်! တောင်မှစံ "သန့်ရှင်း" သို့မဟုတ် Windows အ CCleaner ကိုသန့်ရှင်းရေးပြီးနောက် - အစီအစဉ်ကိုယာယီဖိုင်တွေအများကြီးကိုတွေ့သဖြင့်, disc ကိုသန့်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့ကမ်းလှမ်း ...
ဒီ tool က Windows ကို optimized ကြပြီမဟုတ်တဲ့သူတွေကိုအသုံးပြုသူများအထူးသဖြင့်အသုံးဝင်နိုင်ပါတယ်, စနစ်အမှားများနှင့်မလိုအပ်သောဖိုင်များကိုအမြိုးမြိုးကနေသန့်ရှင်းနိုင်ခြင်းမရှိသေးပေ။
အဆိုပါအစီအစဉ်ကိုအပြည့်အဝရုရှားဘာသာစကားကို semi-automatic mode မှာလည်ပတ်ထောက်ခံပါတယ်။ စစ်ဆင်ရေးကာလအတွင်းသုံးစွဲသူသန့်ရှင်းရေးနှင့် optimization စတင်ရန်ခလုတ်တစ်ခုနှိပ်မှသာလိုအပ်ပါတယ် ...
အကောင်းဆုံးကို PC settings ကိုတင်ထားရန်အသေးစား shareware utility ကို။ ဒါဟာ "အမှိုက်သရိုက်", registry ကိုသန့်ရှင်းရေး, disk defragmenter ကနေ Windows ကို system ကိုသန့်ရှင်းရေးပြီးနောက်က run ဖို့အကြံပြုလိုတယ်။
(လမ်းဖြင့်, များသောအားဖြင့်အလိုအလျှောက်ပါကဆုံးဖြတ်သည်) ကိုတစ်ဦး Processor ကိုနဲ့ Windows အပေါ်: ဒါဟာတစ်ခုသာရွေးချယ်စရာစုံတွဲပေးထားသည်။ ထို့နောက်ရုံကိုကလစ်နှိပ်ပါ button ကို "ယခုအကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်ပါ" ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
အခြို့သောအချိန်ပြီးနောက်စနစ် optimized မည်ဖြစ်ပြီးသင်ဂိမ်းများကိုစတင်ရန်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါ။ အများဆုံးကုန်ထုတ်စွမ်းအားကို enable သင် program ကိုမှတျပုံတငျဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
အကြံပြု မဟုတ်ရင်ရလဒ်သတိမမူမရနိုင်, အခြားနှင့် တွဲဖက်. ဒီ tool ကိုသုံးပါ။
ဒီပရိုဂရမ်, အချိန်ကြာမြင့်စွာ updated မခံဆိုတဲ့အချက်ကိုရှိနေသော်လည်းတစ်အတော်လေးကောင်းသော option ကို "Accelerator" ဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ Hyper-acceleration ကိုအအေး, နောက်ခံ setting ဂိမ်း (ကျနော်အလားတူအစီအစဉ်များကိုထိုကဲ့သို့သောအစိုးရများသတိထားမိခဲ့ပါဘူးများအတွက်) နှင့်ဤအစီအစဉ်တွင်, စစ်ဆင်ရေး၏အတော်ကြာ Modes သာရှိပါတယ်။
ဒါ့အပြင်သူက DirectX ကို setting များကိုဒဏျကွေးရန်၎င်း၏စွမ်းရည်ကိုသတိပြုသင့်ပါတယ်။ လည်းလက်တော့အသုံးပြုသူများအတွက်အလွန်လျောက်ပတ် option ကိုရှိပါတယ် - စွမ်းအင်ချွေတာ။ သင်မြို့ရိုးမှအကွာအဝေးကစားမယ်ဆိုရင်ဒါဟာအသုံးဝင်ပါလိမ့်မယ် ...
ဒါ့အပြင်သူကဒဏ်ငွေ-tuning DirectX ကိုဖြစ်နိုင်ခြေသတိပြုသင့်ပါတယ်။ Laptop ကိုအသုံးပြုသူများအတွက်အဲဒီမှာဘက်ထရီပါဝါကိုချွေဖို့အမှန်တကယ်အင်္ဂါရပ်တည်ရှိပြီးဖြစ်သည်။ သငျသညျတခုထွက်ပေါက်ကနေဝေး play မယ်ဆိုရင်ဒါဟာအသုံးဝင်သောဖြစ်လိမ့်မည်။
ဂိမ်း Accelerator အသုံးပြုသူဂိမ်းပိုကောင်းအောင်မသာ, ဒါပေမယ့်လည်း FPS ၏ပြည်နယ်စောင့်ကြည့်ဖို့, Processor ကိုနှင့်ဗီဒီယိုကဒ်ပေါ်တွင်ဝန်နှင့်လျှောက်လွှာအသုံးပြုသော RAM ကိုပမာဏစောင့်ကြည့်ခွင့်ပြုပါတယ်။ ဤရွေ့ကား data တွေကိုပိုပြီးလက်စွဲစာအုပ်ဒဏ်ငွေ tuning ဘို့လိုအပ်တယ်အချို့ဂိမ်းအကြောင်းကိုကောက်ချက်ဆွဲရန်ခွင့်ပြုသည်။
ဂိမ်းများကိုအရှိန်မြှင့်နဲ့ Windows ၏ optimization ဖို့ "မီးသတ်" ကိရိယာတခုဖြစ်တယ်။ ယင်း၏စွမ်းရည်အလုံအလောက်ထူးခြားတဲ့များမှာစကားမစပ်, မတိုင်း tool ကိုမီးသတ် Games နိုငျသောသူတို့အား OS ကို setting များကိုပြန်လုပ်နှင့်မေးရန်နိုင်ပါလိမ့်မည်!
စူပါ-mode ကိုမှ Switch - ဂိမ်းအတွက်တိုးတက်လာသောစွမ်းဆောင်ရည်;
(တခြား utilities များကမသိရှိကြသည့်ဝှက်ထားသောအပြင်အဆင်များ, အပါအဝင်) OS ကို Windows ရဲ့ optimization;
ဂိမ်းနှင့်အတူဖိုလ်ဒါ defragment ။
ဒီပရိုဂရမ်ကို (စကားလုံးများ၏ truest သဘောအရ!) ကွန်ပျူတာဂိမ်းအမြန်နှုန်းကိုပြောင်းလဲပေးနိုင်သည်။ ထိုသို့ညာဘက်ဂိမ်းသူ့ဟာသူသို့ "ပူ" ခလုတ် အသုံးပြု. လုပ်ဆောင်နိုင်တယ်!
ရဲ့သင်သူဌေးသတ်ဖြတ်နေကြသည်နှငျ့သငျနှေးပြကွက်၌သူ၏အသေခံမြင်ချင်ဆိုပါစို့ - စာနယ်ဇင်း, ယခုအချိန်တွင်ပျော်မွေ့, ပြီးတော့လာမယ့်သူဌေးကမှဂိမ်းမှတဆင့်သို့ပွေးလေ၏။
မြန်နှုန်းဂီယာဂိမ်းပိုကောင်းအောင်နှင့်သင့် PC ကို၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်ကူညီပေးဖို့မဖြစ်နိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့သံစဉ်းစားဆင်ခြင်စရာအားထုတ်မှုလိုအပ်ပါတယ်တစ်ခုစစ်ဆင်ရေး - အစား, လျှောက်လွှာ izmenenieskorosti ဂိမ်းကစားအတိုင်း, သင်တို့၏ဂရပ်ဖစ်ကဒ်နှင့် Processor ကို load ပါလိမ့်မယ်။
ဂိမ်း application များ၏စွမ်းဆောင်မှုကိုထိခိုကျနိုငျကွောငျး "မလိုချင်တဲ့" နောက်ခံဖြစ်စဉ်များနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကို turn off နိုင်ပါတယ်စဉ်အတွင်းဤသည် utility ကို run သည်။ ကြောင့်ဒီရန်, CPU နဲ့ RAM ကိုဖြန့်ချိနေကြပါတယ်နှင့်အပြည့်အဝတစ်ပြေးဂိမ်းမှညွှန်ကြားခဲ့သည်။
မည်သည့်အချိန်တွင်ယင်း utility ကိုသင်ပြောင်းလဲမှုများကိုပြန်လှိမ့်ဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ စကားမစပ်, သုံးစွဲဖို့ကြိုတင် antivirus ကိုနဲ့ firewall ကို disable လုပ်ဖို့အကြံပြုသည် - ဂိမ်း Turbo Booster သူတို့နှင့်အတူဆန့်ကျင်စေနိုင်သည်။
ရေးသားသူ: အဲလက်စ် Shys
ဂိမ်း Prelauncher အလားတူအစီအစဉ်များ, အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ညွှန်းကိန်းသေချာ, ဒီဂိမ်းစင်တာမှာသင်၏ Windows လှည့်ကြောင်းအထူးသဖြင့်သူတို့အထဲကနေမတူ!
သာမှတ်ဉာဏ် clean များစွာကိုထိုကဲ့သို့ tools များအနေဖြင့်, ဂိမ်း Prelauncher ကအစီအစဉ်များကိုမိမိတို့ကိုယ်နှင့်လုပ်ငန်းစဉ်များကိုပိတ်ထားအတွက်သွင်ပြင်လက္ခဏာ။ ဒါဘွား, disk ကိုအသုံးပြုခွင့်နှင့် CPU ကိုအဘယ်သူမျှမမှတ်ဉာဏ်ကို ယူ. မရပေ။ သည်, ဂိမ်းနှင့်သင့်ကွန်ပျူတာ၏အရင်းအမြစ်များအရေးကြီးဆုံးလုပ်ငန်းစဉ်များကိုသာအပြည့်အဝအသုံးအဆောင်များဖြစ်လိမ့်မည်။ ဒီကြောင့်, နှင့်အရှိန်အောင်မြင်နေပါသည်!
autorun န်ဆောင်မှုများနှင့်အစီအစဉ်များ, စာကြည့်တိုက်, ပင် Explorer ကို (desktop ပေါ်မှာအတူ, etc menu ကို, ဗန်း, Start): ဒီ utility ကိုလုနီးပါးအရာအားလုံးကိုပိတ်မည်။
န်ဆောင်မှုဂိမ်း Prelauncher လျှောက်လွှာကို disable ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကွန်ပျူတာများ၏စစ်ဆင်ရေးကိုထိခိုက်စေခြင်းငှါပွငျဆငျရလိမ့်မည်။ အားလုံးကတော့ဖြစ်စဉ်များမှန်ကန်စွာပွနျလညျထူထောငျ, မိမိတို့လျော်သောစစ်ဆင်ရေးတစ်ခု system ကိုပြန်ဖွင့်ရန်လိုအပ်ပါသည်နေကြသည်။ ပရိုဂရမ်ကိုအသုံးပြုခြင်းဟာ FPS နှင့်အထွေထွေအတွင်းစွမ်းဆောင်ရည်တိုးမြှင့်ပါလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်သူတို့ရဲ့ယခင် settings ကိုဖို့ OS ကို setting များကိုပြန်လာရန်ဂိမ်းပြီးနောက်မမေ့မလြော့ပါ။
ရေးသားသူ: Smartalec Software များ
ဒါဟာကောင်းစွာအပေါငျးတို့သအကျွမ်းတဝင် Explorer ကိုကွန်ပျူတာအရင်းအမြစ်များကိုအများကြီးစားသုံးကြောင်းလူသိများသည်။ GameOS - ဒီ utility ကို၏ developer များ gamers တွေအတွက် GUI တစ်ခုလုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။
သူတို့ဂိမ်းအတွက်သုံးပါနိုင်အောင်ဒီအခွံ, အရင်းအမြစ်များ, memory နဲ့ CPU ကိုတစ်နိမ့်ဆုံးအသုံးပြုသည်။ ပြန်အကျွမ်းတဝင် Explorer ထဲမှာ 1-2 mouse ကိုကလစ် (သင့် PC ကို restart ပြန်လုပ်ဖို့လိုပါတယ်) ရှိနိုင်ပါသည်။
ဒါနဲ့ disc ကိုတစ် backup လုပ်ထားမိတ္တူဖြစ်စေလျက်, သင်၏ Windows setting များကိုမချခင်အကြံပြု: